Audio ary tsy misy fatiantoka no tonga amin'ny Apple Music ho an'ny Android Beta | Vaovao IPhone
Ny feo ara-panahy sy tsy misy fatra dia mamely ny Apple Music beta ho an'ny Android
Tao anatin'izay taona faramparany Apple dia nametraka tanjona: hanatsara ny vola miditra amin'ny serivisiny nomerika, ary izany dia serivisy izay ialan'ny mpampiasa maro ary ahazoany tombony lehibe noho ny fisoratana anarana. Apple Music angamba dia iray amin'ireo tolotra be mpahalala indrindra, serivisy mozika mivantana izay mifanaraka amin'ireo fitaovana Android aza. Ary marina indrindra anio dia te-hitondra anao ny vaovao farany Apple Music ho an'ny Android izahay. Spatial Audio sy Lossless Audio dia ho tonga amin'ny Apple Music ho an'ny Android amin'ny fanavaozana manaraka. Tohizo ny famakiana fa lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra.
Ataovy ao an-tsaina ireo fanovana ireo tsy misy afa-tsy ao amin'ny beta an'ny Apple Music for Android. Raha te hiditra amin'ny beta vaovao an'ny Apple Music for Android dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ny Channel fantsona Play Store beta (Ankehitriny tsy misy slot misy). Aorian'ny fanavaozana dia ho afaka hiditra amin'ny Dolby Atmos Spatial Audio izahay, ao amin'ireo hira azo raisina izay lasa miha-betsaka hatrany noho ny fandaharam-pitsaboana ataon'izy ireo avy amin'i Apple (Azonao atao ny mahita ireo hira mifanaraka rehefa mahita ny sary Dolby Atmos eo amin'ireo hira ianao). Ho fanampin'izany, ho hitantsika ihany koa ny famerenana feo tsy misy fatiantoka vaovao amin'ny hira sasany sy amin'ny ny menio preferences playback dia afaka misafidy iray amin'ireto safidy manaraka ireto izahay:
Fahombiazana avo lenta: AAC misy fanjifana angona ambany (amin'ny tamba-jotra finday)
Kalitao avo lenta: AAC 256 kbps
Tsy misy fatiantoka: ALAC hatramin'ny 24 bit / 48 kHz
Tsy misy fatiantoka avo lenta: ALAC hatramin'ny 24 bit / 192 kHz
Ireo fanovana ireo raha ny amin'ny audio spatial sy audio lossless dia miaraka amin'ny fahafaha-manaor crossfades mandeha ho azy hamenoana safidy safidy manualHo fanampin'izay, nihatsara koa ny fiasan'ny tranomboky multimedia. Ary ianao, mpampiasa Apple Music ve ianao amin'ny Android? Hivadika serivisy mozika streaming an'i Apple ve ianao raha tonga ity famerenana mozika tsy misy fatiantoka vaovao ity? Mamaky anao izahay ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Ny feo ara-panahy sy tsy misy fatra dia mamely ny Apple Music beta ho an'ny Android
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny sticker WhatsApp
Andro voalohany: fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple